Bayern Munich 3-0 Barcelona: Barca Oo Lagu Soo Xasuuqay Ciida Germalka, Benfica Oo Guul Gaartay
HomeWararka CiyaarahaBayern Munich 3-0 Barcelona: Barca oo lagu soo Xasuuqay Ciida Germalka, Benfica oo guul gaartay
December 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada, Warka Xiisaha Leh 0
kooxda Barcelona oo caawa la filayay inay guul ka gaarto Bayern Munich marka la eego Macalinka Cusub ee Xavi ayaa mar kale Xasuuq loogu geestay garoonka Allianz Arena kulan ku soo dhamaaday 3-0,
Xidigaha kala ah Thomas Müller iyo Leroy Sané ayaa labo gool qeybta hore u dhaliyay Bayern Munich halka goolka Saddexaad uu ku daray Jamal Musiala, iyadoo Barcelona aysan u suura galin xitaa inay shabaqa soo taabato hal mar waxayna guruubka E kala dhameesatay kaalinta booska Saddexaad.
Xavi Hernandez ayay kooxdiisu u safartay magaalada Munich oo ay marti ugu ahayd Bayern Munich, waxaana loogu soo xambaariyey guul-darro 3-0 ah, iyadoo loola ciyaaray sidii koox heer labaad oo kale ah oo aanu ku jirin damac iyo awood guul heli karta.
Thomas Muller ayaa gool madax ah ku furay ciyaarta, ka hor intii aanu darbo xooggan qasab ku dhaafin goolhaye Ter Stegen, kaas oo uu kasii dambeeyey da’yarka Jamal Musiala oo kubbad uu dhulka raaciyey kusii niyad-jabiyey Barcelona.
Bayern Munich ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxday Group E iyadoo wada guuleysatay dhamaan lixdii ciyaarood ee wareegga group-yada oo 18 dhibcood haysata, waxaana labaad ku dhamaysatay Benfica oo 8 dhibcood ku yeelatay guul ay ka gaadheen Dynamo Kiev.
Kooxda reer Portugal ayaa u baahnayd in ay guuleysato sidoo kalena laga badiyo amaba la barbarreeyo Barcelona, taas oo sidii ay doonayeen ay u samaysay Bayern Munich oo ay guul-darro u xambaariyeen.
Barcelona ayaa ka ciyaari doonta tartanka Europa League.